Der Spiegel:Waxa sabab u ah inay kacdo ( Air Berlin) sheekhyada imaarada Abu Dhabi - Horn Future
Der Spiegel:Waxa sabab u ah inay kacdo ( Air Berlin) sheekhyada imaarada Abu Dhabi
Berlin (Der Spiegel )-majjallada Der Spiegel ee todobaadle ah ayaa taliyayaasha imaarada Abu Dhabi dusha ka saartay masuuliyada inay kacdo shirkadda diyaarada ee (Air Berlin) oo ah diyaarada labaad ee ugu weyn dalka Germany oo dhan.
Waxay ku tilmaamtay in shirkaddani ay soo gudbiso maalintii Salaasadii codsi ay ku sheegtay inay kacday sida tallaabo lama filaan ah oo halis ah oo raad aad u ba’an ku yeelan doonta sanado xidhiidhka Berlin iyo Abu Dhabi oo horseedi doonta inay ka war wareegaan maalgashadayaashu wax heshiis ah inay la galaan Imaaraadka Carabta”taasoo sheekhyada maamula ay u hogaansami waayeen xataa balantii ay u qaadeen Chancellor Angela Merkel.
Maqaal majjaladdan ay ugu dhigtay cinwaan “sheekhyada ayaa u sababa ah” ayaa waxay ku sheegtay kasakow xafladii dhamaadkii 2011 ee Midowga kooxda diyaaradaha Emirates ay ku iibsatay 29% kamid ah saamiyada “Air Berlin” si ay u badbaadiso adayga ay la kulantay,waxay ahayd mid cad bilowgiiba heshiiskan dhexmaray labadan dhinac in uunan munaasib ku ahayn midba midka kale.
Waxa majjalladan ay cadeeysay in “Air Berlin”, oo si degdeg ah u noqotay mid tartan kula jirta khadadka Germany ee ugu horeeya ee “Lufthansa”,waxay rajaynaysay inay awood u hesho wada-shaqaynta ay la gashay Midowga kooxda diyaaradaha Emirates si ay u gasho suuqa caalamiga ah ee duulimaadyada.
Waxay intaa ku dartay in gacan ka gaysashada Abu Dhabi ee “Air Berlin” ay ahayd tallaabo loo qaaday qaab guud oo ah qorshaheeda ay damacsanayd inay kaga hormarto shirkadda uu ka dhexeeyo xafiiltanka aadka u ba’an ee Emirates Airline ee ay leedahay imaarada Dubai.
Der Spiegel ayaa sheegtay in heshiiskan oo ahaa mid aad u ba’an tan iyo bilowgii imika uu ku dhamaaday fadeexad noqon doonta mid raad waxyeello leh ku yeelan doonta sanado xidhiidhka u dhexeeya Germany iyo Imaaraadka Carabta,kadib markii ay ku dhawaaqday kooxda Midowga diyaaradaha Emirates inay joojisay taageerada dhaqaale ee ay u fidinaysay Berlin Air iyada oo cidlo kaga tagtay si ay ula kulanto inay kacdo.
Waxa la sheegay in adayga ay ku jirtay khadadka labaad ee ugu weyn ee Germany in hore loo ogaa muddo,taas oo ku kaliftay Chancellor Angela Merkel inay u socdaashao iyada oo uu wehliyo madaxa shirkadda “Lufthansa” Carsten Abu Dhabi bishii May ee lasoo dhaafay, halkaas oo ay ka wada hadleen sheekhyada imaradan xalka dhibaatada ” Air Berlin “.
Der Spiegel ayaa xustay in booqashadan aynan kasoo bixin wax xal ah,iyada oo tilmaamtay in sheekhyada Abu Dhabi ay u ballan-qaadeen Chancellor Angela Merkel inay sii wadayaan taageerada “Air Berlin” ilaa laga gaadhayo dayrta 2018 ugu yaraan.
Waxa majjalladu ay kusoo gunaanaday su’aasha ah: Yaa u malayn in heshiisyo uu la gali Imaaraadka Carabta kadib markii ay u caddaatay in sheekhyadani aynan dhawraynin inay fuliyaan xataa balantii ay u qaadeen Chancellor ka Germany?
« Turkish Airlines oo 60 tan oo cunto gargaar ah gaadhsiisay caasimadda Somalia ee Muqdisho	» Diyaarad (drone) ah oo ku degtay xabsi Faransiis ah oo u tuurtay xidhmo maxaabiista kujirta